I-LXQt 0.15.0 isivele lapha yethulwe ukuthuthuka okuhlukahlukene nezinguquko ezibalulekile | Kusuka kuLinux
Ngemuva konyaka ongaphezulu kokuthuthuka Ukukhishwa kwemvelo yedeskithophu ye-LXQt 0.15.0 kwenzeke, yathuthukiswa iphrojekthi ye-LXDE. I-LXQt c interfaceQhubeka ulandela imibono yenhlangano yedeski yakudala, ukuhlinzeka ngokubukeka kwesimanje ukuthuthukisa ukusetshenziswa.
I-LXQt ibekwe njengokuqhubeka okungasindi, okumodemu, okusheshayo nokulula kusukela ekwakhiweni kwamadeskithophu eRazor-qt naseLXDE, amunce izici ezinhle zombili.
Kulabo abangazi nge-LXQt, kufanele bazi ukuthi lokhu eimvelo yedeskithophu yomthombo ovulekile nevulekile yeLinux, umphumela wokuhlangana phakathi kwamaphrojekthi we-LXDE neRazor-qt futhi obekwe njenge inketho enhle kakhulu yamaqembu ezinsizakusebenza eziphansi noma lawo akhetha ukonga izinsizas, njengokuthuthuka okukhulu kwe-LXQt kunikeza ideskithophu engasindi nokulawula okuningi kune-LXDE.
Yini okusha ku-LXQt 0.15.0?
Kule nguqulo entsha ifayela le- ukuhlela umphathi wefayela le-PCManFM-Qt kanye nomtapo wezincwadi weLibFM-Qt, lapho bangeze inketho yokuxhasa ukusebenza kwewindi elilodwa (awekho amabhokisi ezingxoxo kumawindi ahlukene).
Ngaphandle kwalokho sfuthi ngasebenzisa amandla wokugcina unomphela noma okwesikhashana amaphasiwedi isetshenziswe ngesikhathi sokufaka (isebenza nge-gnome-keyring).
Olunye ushintsho yilokho ithuluzi lamathuluzi lithuthukiswe ngolwazi lwefayela, inketho yokunquma isikhathi lapho amafayela kudoti kufanele asuswe ngokuzenzakalela, shintsha izithonjana ku-fly.
Imenenja yefayela ye-LXQt nayo iyagqanyiswa, eyakhiwe ngesisekelo selabhulali yeLibFM-Qt futhi esetshenziswa ngokuzenzakalela ku-PCManFM-Qt ukufinyelela amafayela.
Ngokuqondene ne ukuthuthuka kokucushwa kwesibuko, singakuthola okwengeziwe ukusekelwa kokubeka amaphephadonga kuma-setups amaningi wokuqapha, a i-plugin entsha ukulawula ukukhanya kwe-backlight kusuka esikrinini, inketho ingezwe kushintshi ledeskithophu ukukhombisa kuphela ideskithophu esebenzayo futhi nayo ingeziwe imodi yokwehlisa ukukhanya kwesikrini ngemuva kwesikhathi esithile sokungasebenzi ohlelweni lokuphathwa kwamandla.
Ku-emulator yokugcina I-QTerminal, ibhokisi lenziwe kabusha ukumiswa obe sekucwebezela futhi kwahanjiswa, futhi se inikeza amandla wokusetha osayizi bakho abahleliwe futhi uwabonise ngaphandle kozimele kanye nenketho engeziwe yokuthumela umlando kusihleli sombhalo. Izingqinamba ezixegayo lapho kushintshwa amafonti zixazululiwe.
Esibukweni sesithombe I-LXImage-Qt, ibhokisi lifakiwe kwimenyu yefayela ukusebenza namafayela ukuvula ifayela kuhlelo lokusebenza lwangaphandle, kungeze ikhono lokumisa ama-hotkeys nosayizi wohlu lwamafayela osanda kuvulwa nemodi yokubonisa uhlaka lwezithombe nayo ingeziwe.
Kwezinye izinguquko ezenzekayo kule nguqulo entsha yilezi:
Imenyu enwetshiwe yokucinga imininingwane.
Ukuma kwephaneli efanele kunikezwa kuma-setups amaningi wokuqapha.
Kungezwe inketho kumphathi womsebenzi ukuhambisa amawindi kudeskithophu ebonakalayo elandelayo noma eyedlule usebenzisa isondo legundane.
Umtapo wezincwadi we-libQtXdg ucije ukuboniswa kwezithonjana ngefomethi ye-SVG lapho usondeze isithombe.
Umsebenzi othuthukisiwe ngezandiso zefayela kungxoxo yefayela.
Ukuzulazula kwekhibhodi kuthuthukisiwe.
Ukwazi eminye imininingwane mayelana nokukhishwa kwale nguqulo entsha, ungazihlola Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Ekugcineni sulindele ukuhlanganiswa ye-Ubuntu (i-LXQt inikezwa ngokuzenzakalela ku-Lubuntu), i-Arch Linux, i-Fedora, i-openSUSE, i-Mageia, i-FreeBSD, i-ROSA ne-ALT Linux, zilungele ngamahora ambalwa noma ngezinsuku ezimbalwa (kuya ngokusatshalaliswa).
Uma unesifiso sokulanda ikhodi yomthombo bese uzihlanganisa wedwa, kufanele wazi ukuthi kunjalo isingathwe ku-GitHub futhi iza ngaphansi kwelayisense le-GPL 2.0+ kanye ne-LGPL 2.1+.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-LXQt 0.15.0 isivele lapha yethulwe ukuthuthuka okuhlukahlukene nezinguquko ezibalulekile
Futhi kwenzekani kuwebhu, ishiywe? Okufanayo nge-lxde, ayilayishwanga amasonto.
I-Distrochooser: Iwebhusayithi ekusiza ukuthi ukhethe i-Distro ye-GNU / Linux efanele